फर्सिको मुन्टाका यि कैयोँ फाइदा, जसले क्यान्सरदेखि यि थुप्रै रोगसँग लड्न मद्धत गर्छ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/फर्सिको मुन्टाका यि कैयोँ फाइदा, जसले क्यान्सरदेखि यि थुप्रै रोगसँग लड्न मद्धत गर्छ
फर्सिको मुन्टाका यि कैयोँ फाइदा, जसले क्यान्सरदेखि यि थुप्रै रोगसँग लड्न मद्धत गर्छ
काठमाडौँ । फसीको मुन्टा मन नपर्ने सायदै होलान् । यो सिजन पनि फर्सीको मुन्टाको हो । तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको सागको नियमित सेवनले कैयौँ रोगहरु विरुद्ध लड्न मद्धत गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
फर्सी खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो । तर, फर्सीको पात वा मुन्टो खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । यसबाट प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ ।
फाइबर एक यस्तो तत्व हो जसको सेवनले तपाईँलाई अनेक फाइदा हुन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले तपाईँको शरीरमा भएको क्यान्सर कोषीकाहरुलाई रोक्नमा मद्दत पुर्याउँछ । किनकी फर्सीको पातको सागले नष्ट भएको टेस्टीकुलर र स्पर्म बन्ने प्रक्रियालाई मद्दत पुर्याउँछ । जसको मद्दतले प्रजनन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
फर्सीको साग भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको राम्रो स्रोत हो । युएसडीए नेशनल न्युट्रिएन्टको अध्ययन अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गुणहरु हुन्छ कि तपाईँलाई खतरनाक रोगबाट जोगिन मद्दत गर्छ ।
फर्सीको पातलाई आफ्नो नियमित भोजनमा समावेश गरेर तपाईँ उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगबाट सुरक्षीत रहन सक्नु हुनेछ । पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएका युवाहरु समेत कृषि पेशामा लागेर फर्सी लगायतका तरकारीहरु लगाएर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।
विहेपछि किन महिला मोटाउँने र पुरुष दुब्लाउने हुन्छ ?सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ! अबस्य शेर गर्नुस्
क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगको औषधी हो यो फूल ! (प्रयोग गर्ने तरिका सहित)